बजारमा सेयरको मूल्य घटेका बेला किन्ने कि बेच्ने ?
बजारमा माग कम र आपूर्ति बढेका कारणले सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागिरहेको हो भन्दा पनि फरक नपर्ला ।
सामान्यतया वस्तु विनिमय बजारमा भाउ घटेका बेला किन्ने बढी हुन्छन् । तर, सेयर बजारमा भने उल्टोजस्तो हुने पनि कतिपय लगानीकर्ताको भनाइ छ । पछिल्लो समयमा सेयर बजार खस्किँदो अवस्थामा छ । सेयर बजार ओरालो लागिरहेको छ । १८८१ अंक पुगेको नेप्से घटेर ११ सय अंकमा झरिसकेको छ । पछिल्लो समयमा टप बैंकका भनिने सेयरको भाउमा भारी गिरावट आइरहेको छ । दुई वर्षअगाडि प्रतिकित्ता ३ हजारको सेयर पछिल्लो समयमा ५ सयमा पनि बिक्न छाडेका छन् । धेरैजसो हाइड्रोपावर कम्पनी तथा फाइनान्स कम्पनीहरूको सेयर त आधार मूल्यभन्दा कम यानि रु. सयभन्दा कममा पाउन थालेका छन्, तर पनि सेयर बजारमा सेयर खदिकर्ताहरू पर्याप्त मात्रामा पाइरहेका छैनन् । घटेको भाउमा पनि सेयर किन्न डराइरहेका छन् लगानीकर्ताहरू । कतिपय लगानीकर्ता हेर र पर्खको अवस्थामा पनि रहेका छन् । घटिरहेका बेला सेयर किन्दा फेरि भोलि घट्ने हो कि भन्ने मनोविज्ञानमा रहेका छन् कतिपय लगानीकर्ता । कतिपय लगानीकर्ताको मनोविज्ञान हेर्दा उनीहरू सेयरको भाउ बढिरहेका बेला सेयर किन्ने गरिरहेका पनि छन्, बढेको बेला सेयर किन्दा भोलि पनि बढ्छ कि, नाफा हुन्छ कि भन्ने मनोविज्ञानले काम गरिरहेका हुन्छन् । कतिपय लगानीकर्ताको भनाइमा घटेका बेला सेयर किन्दा भोलि फेरि घट्छ कि, घाटा हन्छ कि भन्ने पनि छ । त्यसो त कतिपय लगानीकर्ता बजार घटिरहेका बेला भोलि फेरि घट्छ कि भनेर पनि घाटा खाएर भए पनि सेयर बेच्ने गरेका पनि नभएका होइनन् सेयर बजारमा ।
त्यसो त कतिपय लगानीकर्ता घटेका बेला किन्ने र बढेका बेला बेच्नका लागि सेयर किन्ने गरेका पनि नभएका होइनन् । यदि सेयर बजार घट्दो अवस्थामा नै छ भने पनि फेरि घट्छ कि भनेर घाटा भए पनि डराएर सेयर बिक्री गर्ने हो भने घटेको बजार बढ्न गाह्रो हुन्छ । सेयर बजार उकालो लाग्न सक्दैन भन्दा पनि फरक नपर्ला । बजारमा बिक्रीको चाप बढेपछि भाउ त्यसै पनि घट्छ, मागभन्दा आपूर्ति बढेपछि भाउ घट्नु स्वाभाविक हो, अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले, नियमले पनि यही भन्छ । सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूले धैर्य गर्न सक्नुपर्छ, होल्ड गर्न सक्नेले होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ । बजार घटेको घट्यै छ, फेरि घट्छ कि भनेर आत्तिएर सेयर घाटा खाएर बेच्ने हो भने सेयर बजार उकालो लाग्न सक्दैन र यस्तो अवस्थामा चलखेल पनि हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । सेयर बजारका माहिर–माहिर खेलाडीहरूले यस्तोमा सेयर बजारमा चलखेल गरेर, हल्ला गरेर सेयर बजारलाई प्रभाव पार्ने नेप्सेलाई तलमाथि पार्ने गरेको पनि कतिपयको भनाइ छ । त्यसो त कतिपय लगानीकर्ता भने कतिपय लगानीकर्ताहरूको बजार घटिरहेको अवस्थामा पनि घाटा खाएर भए पनि बेच्नुपर्ने बाध्यता पनि होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला तर होल्ड गर्न सक्ने क्षमता भएका लगानीकर्ताहरूले होल्ड गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजारमा आपूर्ति कम भए पनि माग बढ्छ र सेयर बजार स्वतः बढ्छ भन्ने हिसाबले लगानीकर्ताहरू अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
सेयर बजारमा नेप्से घटबढ भइरहन्छ । नेप्से कहिले घट्छ त कहिले बढ्छ, नेप्से घटबढ हुने सेयर बजारको विशेषता नै हो । नेप्से घटेपछि बढ्छ पनि, नेप्से सधैं घटिरहँदैन । सधैं बढी पनि रहँदैन । नेप्से घटबढ भइरहन्छ, तर पनि कतिपय अवस्थामा भने बजार घट्ने बढ्नेमा ठूलो ग्याप पनि हुने गरेका पनि हुन्छन्, यसमा आत्तिनु भने हुँदैन । तर पनि नेप्से घटिरहेका छन् भनेर आत्तिने, डराउने भने हुनु हुँदैन । कतिपय विज्ञ विश्लेषकहरूले सेयर बजारलाई वृत्त चक्रका रूपमा पनि लिने गरेका छन् । त्यसो त सेयर बजार घट्ने–बढ्नेमा विविध कारण हुन्छन्, राजनीतिक कारण सरकार परिवर्तन, नियामक निकायहरूको नीति–नियम, निर्देशनका कारण मार्जिन ल्यान्डिनका कारण, बैंकको ब्याजदरका कारण, कतिपय अवस्थामा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको विवादास्पद तर्क, भनाइहरूका कारण, कतिपय अवस्थामा लगानीकर्ताहरूको मनोविज्ञानका कारण, बजारमा चल्ने हल्ला, चलखेलका कारण, बैंकमा तरलताका कारण, माग र आपर्तिको असन्तुलनका कारणm हकप्रद एफपीओ आईपीओका कारणले, पँुजी वृद्धिको कारणले पनि सेयर बजारमा नकारात्मक÷सकारात्मक असर गर्ने गरेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा सेयर बजार निरन्तर ओरालो लाग्न सक्ने पनि सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
पछिल्लो समयमा सेयर बजार निरन्तर आरालो लागेका कारण बजारमा सेयरको आपूर्ति बढेकाले हो पनि धेरैले भन्ने गरेका छन् । बजारमा माग कम र आपूर्ति बढेका कारणले सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागिरहेको हो भन्दा पनि फरक नपर्ला । सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागिरहेका कारणले नयाँ लगानीकर्ताहरू पनि सेयर बजारमा प्रवेश गर्न डराइरहेका अवस्था छ भन्दा पनि फरक नपर्ला । अहिलेको अवस्थामा नयाँ–नयाँ लगानीकर्ताहरू सेयर बजारमा प्रवेश गर्ने वातावरण नबनाए सेयर बजार बढ्ने गाह«ो हुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । त्यसो त सेयर बजार बढ्न नसकेका कारण बैंकको ब्याजदरलाई पनि मान्ने गरेका छन् । कतिपयले बैंहरूको बढ्को ब्याजदरका कारणले कतिपयको भनाइमा सेयरमा लगानी गर्नभन्दा बैंकमा राख्न फाइदा भएको भनाइ पनि छ । बैंकमा सेयर बजारमा जस्तो रिस्क पनि हुँदैन । तर, सेयरमा लगानी गर्दा जोखिम पनि हुन्छ भन्ने केहीको भनाइ छ । तर, नो रिक्स नो गेन भन्ने भनाइ पनि त छ नि । सेयर बजार बढेपछि बैंकमा भन्दा बढी फाइदा सेयर बजारबाट लिन सकिने हुन्छ । यसमा पनि लगानीकर्ताहरूको ध्यान जानुपर्ने हुन्छ । त्यसो त यसमा आआफ्नो विचारले पनि काम गरिरहेको हुन्छ ।
गत वर्षदेखि निरन्तर ओरालो लागिरहनुमा प्रमुख कारण आपूर्ति बढ्नाले नै हो भन्नुपर्छ । यस्तो भनाइ पनि धेरैको छ । बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूले आआफ्नो पँुजी बढाउनुपरेका कारण भारी मात्रामा हकप्रद सेयर जारी गरेकाले लगानीकर्ताहरूसँग थुप्रै सेयर भएर लगानीकर्ताहरू सेयर किन्नमा भन्दा पनि बिक्री गर्नमै लागेको देखिन्छ । यसले गर्दा बजारमा सेयरको मागभन्दा आपूर्ति बढी भएकाले सेयर बजार उकालो लाग्न नसकेको हो भन्दा पनि फरक नपर्ला । एकातिर बैंक ब्याजदरले पनि असर गरेको छ भने अर्कातिर बजारमा धेरै कम्पनीको धेरैको संख्यामा प्राथमिक सेयरहरू जारी भइरहेका छन् । यसले पनि सेयर बजारको दोस्रो बजारमा असर पारेको हो भन्दा पनि फरक नपर्ला । त्यसैगरी कतिपय कम्पनीले ऋणपत्रहरू पनि निष्कासन गरिरहेका छन् ।
एकातिर सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागिरहेका छन् भने अर्कातिर धमाधम विभिन्न कम्पनीले आईपीओ सेयरहरू जारी गरिरहेका छन् । फागुन महिनामा मात्रै ५ वटा कम्पनीहरूको लाखौं कित्ता आइपीओ सेयर निष्कासन भइसकेका छन् । यसले पनि सेयर बजार उकालो लाग्न नसकेको भनाइ कतिपय लगानीकर्ताको छ । यसमा नेपाल धिटोपत्र बोर्डले पनि विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो त दोस्रो बजारमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण त्यति नभइरहेको अवस्थामा पनि आईपीओमा भने लगानीकर्ताहरूको आकर्षण भने रहेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा बजारमै हाइड्रोपावर कम्पनीहरूको सेयर ८०–९० रुपैयाँमा पाइरहे पनि लगानीकर्ताहरू भने १ सय रुपैयाँको आईपीओमा नै झुन्डिरहेका छन् भन्दा फरक नपर्ला । यसमा भने लगानीकर्ताहरू स्वयं सचेत चनाखो र जानकार हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसो त घटेको समयमा सेयर किन्ने हो बेच्ने होइन भन्ने पनि धेरैको भनाइ छ ।
बालविवाह न्यूनीकरणमा स्थानीय तहको भूमिका
समृद्धिका आधार चार ‘ज’
धितोपत्र बजारमा देखिएका बेथितिहरू